Donga, iyo Negro marati art yeashingi eSurma mauto eEthiopiya - Afrikhepri Fondation
Kufambira mberi kwevhavha
Wona zvese zvawanikwa
Mugovera, Ndira 16, 2021
Runako uye fashoni
mhepo mvura nenzvimbo
kugashira AFRICAN INITIATIONS
Donga, iyo Negro martial art yevakashinga maSurma varwi veEthiopiya
Le Donga ndewenhabvu yeAfrica kurwiswa kunowanikwa pakati pevanhu veSurma veEtiopiya. Imwe yenheyo dzekurwira uku, inotsanangurwa semuti wetsiva wechikadzi mutema, ndeyekuti hapana anorasikirwa, hapana anombokundwa, hapana anokunda. Kurwa chete, mutambo uri pakati pevaviri ava vanoverengeka. Mavanga akatambirwa anoti murume anozviratidza akagadzirira kupa hupenyu hwake kune vanhu vake, kuvanhu vake.
Mukati pemutambo uyu pamatanda emapuranga umo vashori vari kutarisana nekutarisana, maviri neviri, chisimba chekukwikwidza chinokonzera vatori vechikamu kuchengetedza misoro yavo nemasangano nemafuta emichero akashongedzwa nokuda kwechinangwa ichi. Simba, unyanzvi uye kukwidzika zvinodikanwa, uye kazhinji kacho hondo idzi dzinofanirwa kugadzirisa kukakavadzana kwekare. Pashure penguva, kufara kunobva pakuona kweropa uye kunwa doro kunosvika pakuguma kwayo, uye mamiriro ekunze anowanzova magetsi.
Iyo Dongas inotarisa kuguma kwekukohwa. Zvikamu izvi zvakazadza uye kuvapo kwemhuri yakavimbiswa kwegore, majaya aya ari kufunga nezvekuroorana. Saka vanoungana pakati pemisha kuti vakwikwidzane uye vanonyengedza vasikana vomunharaunda yezera rokurera.
Vakapfekedzwa zvipfeko zviduku mumatehwe embudzi kana mombe, yakashongedzwa nemaparera uye zviduku zviduku, mukati mazvo zvisinganzwisisiki kuwana sleeve, zvinopesana nemitumbi yakashama uye zviso zvakanyatsoputirwa nepepuru dhena, ocher kana tsvuku tsvuku yevarwi vechidiki (zvikamu zvisina kuvezwa zvakagadzira maitiro akasiyana-siyana emagetsi emagetsi).
Yakaputirwa nemucheka wechipfu kana chechiganda chemhuka, inopinda muhondo dzakawanda dzechisimba chakadai zvokuti dzinonzi dzinonyanya kupisa muAfrica. Muzvokwadi, idzi tsika dzedzidziso dzinoshandura matambudziko akashongedzwa akambopikisa vanhu vanobva kumisha yakasiyana-siyana. Idziviriro inogadzirwa kubva pasi yakasimwa michina iyo varwi vanoita panguva yekufambisa kwavo kwehufundisi nenzira yekudzivirirwa kwemajoni, mabheti, mabvi asiwo mabheti uye kudzivirirwa pamusoro pehurefu hwose hwemaoko. Inogadzirwa nemicheka yakajeka yebhuruu, yebhuruu, yeguru uye dzimwe nguva yhizha maererano nezvinodiwa uye mafivha mukati.
Yakasungirirwa nehutanda hwakareba hwemamiririri e2, yakatemwa mumatanda akaoma (kazhinji acacia) uye yakapedzwa sechikwata chepasllus, vatori vechiDonga vanopikisana pakati pechitenderedzwa chakaumbwa nevataridzi. Chinangwa chemutambo ndiko kuratidza hukama hwake nekurova guruva remupikisi kana kumuita kuti asakwanisa kutora baton.
Ehe, kupesana uku kunogona kushanduka pakugadziriswa kwemunhu zviyero. Dzimwe nguva zvinoitika kuti anorwisa akarova mumwe wake obata akafa, nekuti kupwanya dehenya kana kuti mbambo hachisi chinhu chisiri chinhu uye chinotungamira kurufu. Asi kukosha kwekutanga kweiyi tsika kunosanganiswa nekunyengedza. Izvi zvinoita kuti kusangana kwese kuve nengozi. Chokwadi, kuitira kukwezva kutarisa kwevasikana vadiki vanopinda mukurwisa, vanorwisa dzimwe nguva vanorova mumwe neumwe unopfuura iwo muganho wakatemwa nemutambo.
tinya kuti uverenge zvimwe ...
chikamu AFRICAN INITIATIONS
Mukadzi B - Maya Angelou
Tarisa mheni mhenyu (2018)
Chitendero cheAfrica - Mbog Bassong (Bhuku)
Simba rechinangwa - Chinyorwa (2015)
Gadzira account nyowani
Zadza fomu pazasi kunyoresa
Dzvanya pano kuti uvhare iyi meseji!
Iwindo rinozvivhara otomatiki mumasekondi e7